Azo ovaina ny tantara raha… - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Anisan’ny nanova ny tantaran’izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny nahatonga ny fanovana dia satria nisy lalan-tsaina voafaritra mazava nitondra ho amin’ny fanavaozana ny sehatra samihafa, nifanohana sy nifampiankina. Nanjary revolisiona mahery vaika ny fanavaozana araka izany, satria niainga avy amin’ny fototra ara-tsaina aloha mba hiteraka fahalalana vaovao. Raha mazava ny lalan-tsaina arahin’ny fampianarana eto Madagasikara mety hiova ny tantara. Fa ny PSE ve mamaly izany ?
Ny siansa sy ny tekinika no endrika lehibe nivelarany ka nifanohana ny seha-pamokarana sy ny fanofanana olombelona ; tsy manam-pahaizana fotsiny, fa olombelona tia fikarohana sy famoronana. Io no mampahantra ny firenentsika ankehitriny. Tsy mbola mazava ny lalan-tsaina ho amin’ny fanovana satria ny sehatry ny fampianarana sy ny fanofanana no mandringa. Ary tsy nitondra fanavaozana sy fahaiza-mamorona ny fiovana. Niova ny zavatra sasany, fa endrika ihany fa tsy niorim-paka. Afaka mifehy ny fahalalana fototry ny siansa sy tekinika ve ny fampianarana eto Madagasikara, raha tsy izany mbola ho sarotra ny hanova ny tantara ?
Lafin-javatra roa no takian’ny fanovana sy ny fanavaozana : fahafehezana ireo fahalalana fototra amin’ny siansa sy ny tekinika ; ary fahaiza-manao safidy fototra hanorenana ny soa iombonana hananan’ny firenena fiandrianana. Fanontaniana mipetraka àry ankehitriny ny hoe « miantraika amin’ny maha olona ve ny fanovana samihafa ataontsika mba hiorim-paka amin’izay atao ny fanorenana soa iombonana, raha tsy izany tsy misy tantara antenaina hiova ? »
Nitokana ny toeram-pamokarana fanafody ny filoha Rajoelina, mifandraika amin’ny fikirana ny artemisia, fa ny fampianarana sy ny toeram-piofanana ambony ve mitsinjo ny fampivelarana tokoa ny siansa ? Misy aza zary sehatra hivarotan-tena amin’ny endriny samihafa ny sekoly ambony. Tsy gaga isika fa izay olona heverina ho nandranto fianarana dia tsy manan-tsaina afa-tsy ny asa fivelomana rehefa tafavoaka. Ary maro amin’ny sehatry ny asa no tsy afaka mitsinjo ny soa iombonan’ny mpiara-belona. Dia nivadika ho toeram-pitsentsefana ny asa.
Nanao fotodrafitrasa maro ny filoha Ratsiraka, saingy maro no nindaosin’ny fahafatesana tamin’ireny. Mety ho vanim-potoana fananganana ny maty ve ny lalam-pandrosoana ankehitriny : indostria sy lalam-pirenena, kianja manara-penitra. Tsy ny fotodrafitrasa anefa no tsy nisy teto amintsika, fa ny olona nampiasa azy no mahantra, ka sarotra ny nanova ny tantara.
Izany no ilazana fa revolisiona ara-tsaina ny fanovana sy ny fanavaozana satria mila mivelatra amin’ny fikarohana zava-baovao ny olombelona. Hatreto aloha dia mbola tsy afaka mamaly isika fa miorim-paka ho lalan-tsaina iombonana eto amin’ny firenena ny fahalalana ara-tsiansa. Manampy trotraka izany ny fahantrana mangeja ny Malagasy maro. Zary fahantrana miorim-paka amin’ny fisainana ny fahantrana. Mijoalajoala ny trano fianarana fa ny saina mbola mirefarefa amin’ny tany, hoy ny fitenenana.
Raha tian’ny fanjakana hahomby ny asa fanorenana atao ankehitriny dia ny lalan-tsaina hiorenany no mila tinaiza. Hatreto manko ny politikan’antoko dia mitaiza fifandrafesana fa tsy mbola nitondra fanarenam-pirenena. Miara-rava amin’ny politika tsy mahomby fisainan’ny vahoaka. Ary dia hotohoton’ny fahantrana ny fiainan’ny Malagasy. Satria ny fomba fisainana no voagejan’ny fahantrana lalim-paka, sarotra hongotana. Tena misy fahavononana hanova ny tantara marina ve amintsika ?